Wallets uye zvishongedzo zvakagadzirwa kubva kune zvishandiswazve matairi | Green Renewables
Vagadziri vakati wandei nemakambani munyika vakatanga kushandisa senge mbishi zvinhu iyo taneta mukati machubhu yekugadzirwa kwezvikwama uye zvishongedzo senge ma wallet, mabhandi, zvikwama, makiyi anokosha, Laptopbag, nezvimwe.
El tai rabha Yakaratidza kuve nyore nyore uye yakakodzera zvinhu kutsiva dehwe mune zvigadzirwa zveganda. Nerabha zvinokwanisika kuti ipe yakanaka kwazvo kupindira zvese kuwedzera saizi, kuvhara, sekusona, dhaya kana kunyange kuipenda kuti ugone kuigadzirisa nenzira yakasarudzika.
ari matairi Pamabhasikoro, midhudhudhu, marori, mota uye kunyange matarakita zvinoshandiswa kugadzira zvigadzirwa.
Ndokusaka kune makambani mazhinji, mhizha uye vagadziri vari kuvashandisa kugadzira zvigadzirwa zvine zvakatipoteredza.
Vamwe vakakurumbira vagadziri ndeaya:
Passchal: ndeimwe yemakambani akakosha mukugadzirwa kwe mabhegi akadzokororwa. Mhando dzayo dzakanakisa kune vese varume nevakadzi. Vazhinji vanozivikanwa vanoshandisa ichi homwe yemabhegi akashandiswazve. Mutsara wavo wese ndewemhando yepamusoro uye yekucheka kumucheto.
Ecooriginal brand: iyi kambani inogadzira uye inotengesa zvikwama pamwe nezvishongedzo muEuropean Union. Zvigadzirwa zvaro zvakasarudzika zvachose kubva mukugadzirwa kwegadziriro kuri kungwarira kuchengetedza aesthetics yetaya sezvairi kuitira kuti magadzirirwo nemufananidzo zvisiyane.
Sinamoni-hunyanzvi: Iri bhindaini rine chinangwa chekugadzira zvakasarudzika zvigadzirwa zvine yakaderera nharaunda kukanganisa ndosaka ichishandisa zvigadzirwa zvakapetwa senge matairi asi zvakare inoshandisa inenge isina magetsi mukugadzirwa kwayo kuitira kuti ive akazara ecological uye akagadzirwa nemaoko.
Pneumatics: Iyi ikambani yeArgentina iyo inoshandisa zvakare matairi kugadzira mabhegi nezvikwama zveese saizi.
Boo Noir: Ichi chigadzirwa che eco-chinoshamwaridzika uye chine hunhu chembatya chinogadzirawo mabhegi nezvikwama zvichishandisa matai kunge zvigadzirwa. Iwo magadzirirwo ari epakutanga chaizvo uye pamusoro pese ane hushamwari nemhoteredzo.
Idzi dzese dhizaini dzakanyatso chena sezvo ivo vachidzokorora marara anoraswa kana apedza kushandisa akadai sematai. Asi ivo zvakare vane chaiwo emazuva ano, akanaka magadzirirwo uye panguva imwechete iwo anoshanda zvizere.
Unyanzvi, iyo marara uye kunetsekana kwezvakatipoteredza kunotyaira vanhu vanobva kumatunhu akasiyana epasi kuti vagadzire zvimwe zvigadzirwa zvinobatsira asi zvinochengetedza nharaunda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Environment » Kudzokorora » Zvikwama uye zvishongedzo zvakagadzirwa kubva kune zvekare marata
Ini ndinongoziva iyo Passchal brand uye iyo Boo Noir brand. Pachitoro chaBoo Noir ndakatenga bhegi remota rakadzokororwa makore maviri apfuura, uye rakaita kunge idzva. Uye bhegi iro raifarirwa zvakanyanya neshamwari dzangu ...
Pindura kuna lara
Jorge Pedro Astorga akadaro
mbg ecomundo iguta reSan Luis reArabha chikwama, kana pafacebook San Luis ma wallets.
Pindura Jorge Pedro Astorga
Adriana Restrepo anorirodza. akadaro
Mhoroi vanhu vese, kune kambani diki-diki muMedellin Colombia iri kugadzira zvigadzirwa zvine dhiri rinodzokororwa, zvine dhizaini, mhando uye kuzvipira kwezvakatipoteredza, AR escodiseño, unogona kuiwana pane yake facebook peji ngatimutsigire, ndiye anokunda chirongwa yezvakatipoteredza ADRIANA RESTREPOA.
Pindura kuna adriana restrepo agudelo.